Chart plotting, radar and cartography - Page 24 of 24 - Kaizenlog.com
Posted on 21/04/2017 by admin Chart plotting, radar and cartography Olubasọrọ: Garmin
Aaye ayelujara: http://www.garmin.co.uk
Ishadi ugobe, radar kanye ekudwetshweni kwamabalazwe
Ezimbalwa inkinobho odlulela kuyinto isu ngemuva umugqa Garmin sika kabusha ngokuphelele ishadi icebo, sonar futhi ekudwetshweni kwamabalazwe. Entsha ishadi icebo ukuza ezithwele nge sithuthukiswe satellite emhlabeni wonke asinazo izithombe semephu eyisisekelo yokuthuthukisa izinga ishadi le-vector format.
Kukhona inketho ngcono ukuba BlueChart G2 Vision isibonisi â € “”etholakala pre-zahlelwa ekhadini le-SD â €”” okuyinto ikuvumela ukuba ubone izici noma kuyiqiniso, ngaphezu kwamanzi noma ngaphansi kwamanzi.
Uma uzulazula emathekwini olukhohlisayo noma iziteshi, noma uzama ukuthola i Anchorage ezingajwayelekile, le zasemoyeni inkomba izithombe kungenzeka usizo olukhulu. Kanye photomapping amakhono amasha, Garmin umkhankaso 4 entsha multi-function ekhombisa, kuqala GPSMAP 21cm 4008 for izikebhe lapho oshayelayo isikhala singekho.
Ekugcineni, Garmin sika isikhala esisindisa 46cm radar itawufaka aseqala abathi kuphindwe kabili enamandla nezinye radars e intengo kanye lingakanani ibanga. I GMR 18 sibonisa 5 degrees evundla degrees 25 mpo ugongolo ububanzi, ne ezahlukene 36 nautical miles.
Lolu phiko litheleke isekela MARPA (Mini okuzenzakalelayo Radar itulo ivolumu Aid) ikhono, okuvumela yezikebhe ukulandelela ukuzala, Yiqiniso, isivinini, futhi wabikezela indlela esiseduzane Okuqondiwe amaningi.
I-radar ingabonwa yokuhlukanisa isikrini ne umshini ohlola ishadi, noma ngisho wanameka, okuvumela ukuba uvumelanise radar amasignisha nge izinto umshini ohlola ishadi.
Previous PostPrevious Echomax new-style 230 BR radar reflectorNext PostNext CSB200 Class B AIS Transponder Facebook Peter MuscatCreate your badge Random PostsThe RosaryResolve Map Mismatch dialog boxReportTitleVariable declarators for Crystal syntaxServer type11 questions for President-elect Donald TrumpChoosing BI 5 ways the right platform can make the bi specialist’s life easy – WhitePaperTimeRemarks by President Donald Tusk ahead of the informal summit in MaltaThis Sunday: External Solemnity of the Holy RosaryNew answer to “What’s the most unforgettable food that you have eaten in a foreign land?”The distribution environmentFirst Day of Week/Year constantsManage XML Exporting Formats dialog boxNot Equal [!=] linkDaily Inspiration from JesuitPrayer.orgCFO Agenda – TaxThe pilgrim Rosary of the Jubilee – from October 6th to 16thProviding customer service on siteLecture 5 Linkedin RSS Register Log in